Izany no tsy tokony hamoronanao mpampiasa interface | Famoronana an-tserasera
Tsy tokony hatao mihitsy ny interface-n'ny mpampiasa
Hay pejy am-polony izay mampiseho aminay ny fomba hamoronana ny interface tsara indrindra mpampiasa, fa ny ratsy indrindra? Tsy hoe te hampianatra ny fototra iorenany isika, fa raha ny fijerin'ny didactic kokoa, ny fampianarana ny fomba tsy hanaovana interface-n'ny mpampiasa dia mety hahaliana kokoa.
Izany no nataony masoivoho nomerika antsoina hoe Bagaar ary noho io hevitra io dia nahasarika ny sain'ny maro. Izany hoe, noho ny fampianarana ny fomba tsy tokony hanaovana interface mihitsy, mahasarika fitsidihana marobe amin'ny tranonkalany izy ireo.
Ary izany tokoa ary tsy ilaina koa ny miditra amin'ny raharaha hanazava ny sasany amin'ireo fototra teknika kokoa. Mandeha fotsiny isika User Inyerface ary manomboka milalao amin'ireo singa hita maso samihafa hitanay izahay.
Ny sary famantarana, ilay typografikan'ny taonan'ny fony mbola nisy dinôzôro teto ambonin'ny tany ary ilay FAB miaraka amin'ny "Tsia" izay tsy mandeha akory. Amin'ny fikasanao kely ity tranokala ity dia hahafahanao mahafantatra amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fomba tsy tokony hananganana mpampiasa interface izay miasa.
Ny hany zavatra mandeha amin'ity tranokala ity dia ny rohy mivantana mankany amin'ny pejin'ny masoivoho ary hita eo amin'ny ankavia havia izahay. Azo kitihina izy io ary miasaMora ve izany, huh? Ary ilay rohy izay ananantsika mankany amin'ny pejy manaraka sy ilay tsipika izay mazàna dia manondro fa manana rohy hafa azontsika vangiana isika dia tsy mandeha.
Una hevitra lehibe ao anatiny ary tolo-kevitra sahy ho an'ity masoivohona nomerika ity fa araka ny efa nolazainay teo aloha, miaraka amin'ity hadalana amin'ny tranonkala ity dia afaka mahasarika mpitsidika izy io. Fantatrao fa tsy ilaina ny mamorona ny torolàlana ho an'ny mpampiasa mega mega hahasarika ny besinimaro. Fa kosa mila famoronana kely. Zavatra hitantsika ao Ny fampielezan-kevitr'i Microsoft vaovao amin'ny Windows 1.0.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Tsy tokony hatao mihitsy ny interface-n'ny mpampiasa
Manequin miisa 30 hita amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao mba hitaterana mpandeha an-tongotra